Ogaden News Agency (ONA) – Lacago Balaayiin ah oo Taliska Woynahu Dhacay
Lacago Balaayiin ah oo Taliska Woynahu Dhacay
Haayadaha caalamiga ah oo sheegay in lacag aad u tiro badan wadanka Ethiopia lagala baxay
Global Financial Integrity oo ah haayad caalami ah oo sanadkii hal mar soo saarta warbixinta dhaqaale & qaabka loo maamulo ee aduunka ayaa waxay sheegaty in 5tii sano ee u danbaysay hanti gaadhaysa 70 Billion oo Bir in wadanka Ethiopia dIbada looga saaray. Haayadan ayaa sheegtay in lacagtan wadanka Ethiopia looga saaray si sharci daro ah oo musuqmaasuq ku jiro, taas oo keentay in wadanka Ethiopa ay ku yaraato lacagta adagi isla markaana u sicir barar ka dhaco dalka Ethiopia.
Warbixintu waxay intaas ku dartay lacagta wadanka dibadiidsa looga saaray ayaa waxay ka badantahay 55% lacagta maal gashiga ah (Foreign Direct Investment) ee wadanka gudihiisa soo gashay. Waxa kale oo lacagtan lagu qiyaasay in ay u dhiganto 11.5% wax soo saarka wadanka Ethiopia.
Arrintan waxay abuurtay sooboolinamdu inaku sii badato wadanka Ethiopia isla markaana keentay in u faraq wayn u u dhaxeeyo dadka hantida ummada dhacay & dadka caadiga ah ee muruqooda maala.
Hayadan Global Financial Integrity waxay ka codsatay wadamada reer galbeedka ee lacagatan lagasoo dhacay dalka Ethiopia inay joojiyaan isla markaana ay talabaao ka qaadan.
Waxaynu la soconaa in madaxda dawlada Ethiopia ay guryo iyo hanti ka samaysteen wadamada reer galbeedka & Dubai taas oo dabo galkeedi iyo diwaangalintoodu socdo isla markaana talaabo maxkamad caalami ah sharciga la horkeeni qaa doono sida ay sheegeen haayadaha caalamiga ahi.